Okpomọkụ ígwè obibi, Foto Ụlọ Nga Okpomọkụ ígwè obibi, Cap Okpomọkụ ígwè obibi, Label Okpomọkụ ígwè obibi - Xinhong
Igwe ọkụ kacha
Igwe igwe ọkụ adịchaghị
Nnukwu usoro ikpo ọkụ
Cap Okpomọkụ ígwè obibi
Ịkpọ Okpomọkụ ígwè obibi
Igwe ọkụ ọkụ egwuregwu
Okpomọkụ Press Ngwa
Mpempe akwụkwọ Teflon & teepu ọkụ
Mpempe òké Sublimation
Ihe nkesa teepu
Smart & ọkachamara emebere ihuenyo mmetụ njikwa ihuenyo nwere mmemme enyi na enyi, dị mfe iji yana ịrụ ọrụ nke ọma.
Oke na kacha mma kpo oku okirikiri okirikiri nhọrọ ukwuu kpo oku platen na ngwa ngwa mgbake na-eme ka okpomọkụ pịa ọbụna okpomọkụ & nrụgide nkesa.
Design & ụba
Ọkachamara emebere yana itinye ego iji jide n'aka na igwe ọkụ ọkụ na-adị mma ma rụọ ọrụ nke ọma.
A na-etinye akụkụ ahụ mapụtara UL ma ọ bụ CE iji jide n'aka na igwe ọkụ ọkụ ọkụ dị mma na nkwụsi ike, ogologo ndụ ogologo oge.
EasyTrans ™ ntu aka
EasyTrans ™ Ejima Eletriki
EasyTrans ™ Nchekwa onwe
Ulo oru XINHONG
Otu egwuregwu Xinhong
Ahụmahụ ihe karịrị afọ 18
Ebe ọ bụ na 2002 na wughachi Xinhong Group Limited na 2011, anyị na-emekọrịta ihe dị iche iche nkesa nke okpomọkụ nyefe ubi na-enye ndị ahịa anyị elu-edu okpomọkụ pịa igwe na merie nnọọ aha ọma.
N'ime 100 na-arụ na nkà otu
Ndị otu Xinhong mejupụtara nkwado teknụzụ ọkachamara, ndị otu QC a pụrụ ịdabere na ya na ndị ọrụ zụrụ nke ọma, hụ na a na-eme igwe pịa igwe ọkụ ọ bụla n'ụdị dị elu yana kwụsie ike.
Akwụkwọ ikike ọrụ afọ 5 na okpokolo agba
Xinhong na-enye akwụkwọ ikike afọ 1 na akụrụngwa akụrụngwa ọkụ ọkụ ọkụ, akwụkwọ ikike afọ 5 na okpokolo agba igwe yana ndụ nkwado teknụzụ.
Nwee obi ụtọ na nhazi ahụ na anyị ma wuo igwe ọkụ ọkụ gị
Ọrụ ịre ahịa ntụkwasị obi na nkwado ndị ọkachamara na-echere gị
Akụkụ mapụtara niile bụ CE ma ọ bụ UL enwetara ma nwalee ya nke ọma
Biko kpọtụrụ anyị na anyị ga-enwe na aka n'ime 24 awa.
Maachị 30, 2022
Otu esi eji Mug Press mee ka Tumbler Skinny dị elu nke ọma?
Igwe ọkụ ọkụ Ultra Electric Tumbler maka Sublimation Skinny Tumblers
Maachị 03, 2022
Okwu Mmalite nke akpaka na-akpaghị aka na-eme eletriki eletrik ọkụ ọkụ press Press Press Press V3.0
Ọktoba 18, 2021
Obere Rosin-tech Heat Press (Model#HP230C-2X) Akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ.
Hydraulic 5-10 Tọn Rosin-tech Heat Press (Model#HP3809-M) Akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ
© Nwebiisinka - 2010-2021: Ikike niile echekwabara. Featured Products - Hot Tags - Sitemap.xml - IGBOB Mobile
Ball Pen Okpomọkụ Press Machine , Okpomọkụ Press Pen Printer , Okpomọkụ Press Labels , Ball Okpomọkụ Press Machine , Oku akụrụngwa maka , Obere Label Okpomọkụ Press Machine ,